nice kakhulu futhi kunenzuzo ukubheka ukukhanya brown umbala izinwele. Abanikazi a imibala zikanokusho enjalo ngokuvamile babheka encane kuka yobudala babo. Namuhla zenani ubuhle bemvelo, futhi ukukhanya onsundu izinwele umbala ivame ukwakha umbono engokwemvelo. izintokazi abanesikhumba esimhlophe nge, ukukhanya emehlweni grey oluhlaza noma blue, umthunzi kufanelekile ikakhulukazi. Uma ungeza wonke lo izimonyo akhethwe kahle, uthola ngempela nice, libalele futhi ngokuqondile. Blonde izinwele umbala (isithombe kukhonjisiwe ngezansi) kuthandwa kakhulu, hhayi nje phakathi amantombazana, kodwa futhi abesifazane, kanye abesifazane asebekhulile, ngoba lokhu iyithuluzi omkhulu elikuvumela ukubheka omncane. Ayikho enhle kancane futhi aluka, onikeza ivolumu ezibukwayo izinwele.
Indlela efanele yokwenza ushintsho kusuka bezinga kuya wayefisa umthunzi eliqhakazile?
Uma umnikazi wemvelo ukukhanya brown umbala ithoni ethanda ukwenza izinwele zakho ikhange nakakhulu futhi kube elikhanyayo, ochwepheshe batusa brown ukusetshenziswa ne abe luhlaza golden okuyokunika akhanye futhi sikhulise ubuhle bemvelo izinwele. Kodwa kubalulekile ukuba bayakhohlwa kokushiya. buso Lapha efanelekayo, balms futhi zezinkambi engamakhambi.
Uma umthunzi yangaphambilini ye nezinwele ezimhlophe, umbala izinwele ukukhanya brown yayo indlela umdali kungaba wusizo kakhulu. Kodwa lapha kumelwe singakhohlwa ukuthi ezimhlophe, like black, livela nzima, ngakho izinwele iyoba licace futhi ulahlekelwe ayebuthaka sazo sokuqala emva ukugeza yesithathu ke.
Brunettes uthole oyifunayo umthunzi ukukhanya okuvela okokuqala akunakwenzeka ukuthi aphumelele. Okokuqala, izinwele kufanele ezikhanyisa, bese ababethi umbala brown ukukhanya. Kulula ukudaya wakhe izinwele ezimnyama luhlaza ensundu. Phela, it is kahle "kuthathwe" isikhathi eside waqhubeka izinwele.
Blonde izinwele umbala has a okunhlobonhlobo shades. Kungaba igolide, grey, ukukhanya esinsundu (okufana isethi ezivamile), ithusi-Light Brown, ikhofi, ugologo Brown.
Izinqumo ukuthi uzokwenza wesifazane incike ukunambitheka kwakhe siqu. Kodwa effektnosti kakhulu kangcono uncamela ngokubomvu shades noma ensundu ikhofi, okuyinto enchanting ngokwemvelo.
Blonde izinwele umbala ephethe tinge zegolide ubukeka nice futhi avulekile. Nokho, kumelwe sikhumbule ukuthi ukugcina akhanye futhi umbala isikhathi eside, ngoba izinwele ezinemibala kufanele wabheka ngokucophelela ngemuva.
Uma thina ukushintsha ukubukeka kakhulu ngasizathu simbe uyesaba, ungaqala ukuze uzizamele imicu ngazinye, imibala kanye umbala ukukhanya onsundu. Ngaphezu kwalokho, lo mkhuba kuthandwa kakhulu namuhla. Nalapha futhi, kukhona inala ongakhetha - isibonelo, angakha izinwele uphela noma uhlangothi sivala. Futhi ungakwenza lokhu inqubo nge imicu ezimbalwa ekhanda. Kunoma ikuphi, kwekhanda uyobheka egqamile futhi ngempela yasekuqaleni.
On umbuzo nombala wezinwele futhi izinwele ukunakekelwa kufanele athathwe ngokungathi sína, ngaphandle kwalokho emva izinwele ngenkathi uzolahlekelwa ukubukeka kwakhe kokunethezeka futhi babe shabby.
Umlingisikazi ULyudmila Zaitseva: Biography